Warbixino – PuntSom – kalasoco wararka
Safarka Madaxwayne Farmaajo Ee dalka Jabuuti Saaka uu ku Aadayo.
LAYAAB: Madaxweyne meel fagaare ah ku dhunkaday haweeney & muran ka dhashay-Sawiro
June 4, 2018	Leave a comment 88 Views
Madaxweynaha dalka Philippine Rodrigo Duterte ayaa la kulmay dhaleeceyn kaddib markii uu soo muqday isagoo dhunkanaya mid kamid ah shaqaalaha dalkaasi xilli ay socotay munaasabad toos ah. Duterte oo ka hadlaayay munaasabad dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa goobta ugu yeeray haweeney, wuxuuna ka dhaadhiciyay inay dhunkato. Goobta uu Duterte ku dhunkaday gabadhaha waxaa hareeyay sawaxan iyo qaylo, waxaana inta badan samaynayay ...
DHAGEYSO: Loolanka Wadamada UAE, Turkiga & Qadar oo halis galinaya Qaranimada iyo Sharafta Ummadda Soomaaliyeed?
May 2, 2018	Leave a comment 104 Views
Loolanka sii xoogeysanaya ee u dhaxeeya wadamada Imaaraatka Carabta, Qadar & Turkiga ee ay isku hayaan Soomaaliya ayaa halis laga cabsi qabaa in uu galiyo daganaanshaha iyo midnimada Ummadda Soomaaliyeed, xili si weyn loogu kala aragti duwanaaday. Is balaarinta dhinacyada ee Mashaariicda horumarineed ay siyaasadooda ku fashunayaan ay ka wadaan gudaha dalka ayaa cabsi laga qabaa in uu keeno daganaansho ...
Yemen: Xuuthiyiinta oo Gantaal ku tuuray magaalada Riyadh ee Sacuudi Arabia
April 12, 2018	Leave a comment 53 Views
Kooxda Shiicada ah ee Xuuthiyiinta Yemen ayaa sheegtay gantaal Arbacadii shalay lagu tuuray magaalada Riyadh ee caasimada Sacuudiga. Gantaalkan ayey soo rideen gantaalada difaaca ee Sacuudiga, waxaana la sheegay in gantaalkaasi laga soo tuuray Yemen uu gudaha wadanka Sacuudiga usoo galay 800km. Xuuthiyiinta Yemen ayaa sheegay in sanadkan uu noqon doono sanadkii Gantaalada, waa siduu sheegay afhayeenka kooxdaasi Sharaf ...
Madaxwayne Gaas oo Shir gudoomiyey shirka golaha Wasiirada oo Arimo badan looga hadlay.
March 29, 2018	Leave a comment 149 Views
Halkaan ka Akhriso War Murtiyeed laga soo saaray.
Daawo dhulka ugu barwaaqaysan Puntland oo looga hayaamay halista Alshabaab.
December 29, 2017	Leave a comment 498 Views
Calmadow waa deegaan cilmo ahaan ka duwan magaalooyinka kale ee Soomaaliya, waxaa ku yaala dhowr tuulo, sidoo kale waa dhul dalxiiska ku wanaagsan waa dhul qabow ah oo dhulka ka sareeya wax badan, tuulooyinka sida Moon oo kale waxaa la sheegay inaysan mudo ku dhow labaatan cisho qoraxda laga arag sababtuna waa cimilida oo ah mid qabow cirkana daruuro ...
(DAAWO)Maxay Madaxwayne Farmaajo Iyo Xildhibaanada Puntland kawada hadleen…..
December 25, 2017	Leave a comment 286 Views
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa casumaad u sameeyey Guddoomiyaha iyo xubno ka tirsan Baarlamaanka Puntland kuwaas oo Magaalada Muqdisho kaga qeyb galaya Shirka Wada tashiga Baarlamaanada heer Federaal iyo heer dowlad Gobeleed. Sidoo kale, casumaaddan waxaa qayb ka ahaa Guddoomiyaha Golaha Shacabka Mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, Guddoomiyaha Aqalka Sare Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Xildhibanno ka tirsan ...
XOG+SAWIRRO: Itoobiya & Puntland oo todobaadkan xariga ka jaraya Suuq cusub oo lagu….
December 17, 2017	Leave a comment 272 Views
Todobaadkan wafuud ka socota Puntland iyo dawladda Itoobiya ayaa xariga ka jaraya Suuq cusub oo muhiim u ah ganacsatada labada dhinac, kaas oo laga hirgalinayo Kastamka Tuurdibi ee duleedka magaalada Goldogob ee gobalka Mudug. Wafdi ka socda dawladda Puntland oo uu hogaaminayo Wasiirka Ganacsiga & Warshadaha Cabdiweli Xirsi Indho-Guran ayaa tagay magaalada Goldogob, si bulshada halkaas loogu wacyigaliyo muhiimada Kastamkan ...
SAWIRRO:Madaxwaynaha Galmudug Xaaf ,Saraakiisha Puntland iyo Taliyaha Ciidamada xoogga dalka General gorod oo Furay Wadooyinkii Xirnaa ee Gaalkacyo
December 16, 2017	Leave a comment 177 Views
Madaxweynaha Galmudug Mudane Axmed Ducaalle Geelle ,Taliyaha Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Cabdiwali Jaamac Gorod iyo Mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland ayaa maanta ku guuleystay in ay furaan wadooyinkii ku xirmay dagaalkii ka dhacay Magaalada Gaalkacyo. Furitaanka wadooyinkaan ayaa yimid ka dib markii maalmihii lasoo dhaafay Madaxweyne Xaaf uu Gaalkacyo ka waday Ololo nabadeyn ah. Wadooyinka maanta la furay ayaa ah ...
(DAAWO+SAWIRRO)Madaxwayne Gaas iyo Safarkiisa Muqdisho iyo Shir Xasaasi oo beesha caalamka Muqdisho….
December 2, 2017	Leave a comment 112 Views
Maxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wefti balaadhan oo uu hogaaminayo ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 02 December 2017 safar shaqo ugu ambabaxay magaalada Muqdisho ee caasimadda dawladda Federaalka ah Soomaaliya. Madaxwaynaha iyo weftgiisa ayaa kahor intaanay ka anbabixin garoonka diyaaradaha magaalada Garoowe ee Kanooko ayaa waxaa kusii sagootiyay madaxwayne kuxigeenka dawladda Puntland Eng Cabdixakiin Xaaji Cabdulaahi Cumar Camay iyo madax katirsan golayaasha ...
(WAR DEG DEG SAWIRRO) 2,500 oo Askari oo Puntland ay ku Wareejisay dowladda Soomaaliya….
November 30, 2017	Leave a comment 231 Views
Dowladda Puntland ayaa maanta oo khamiis ah si rasmi ah dowladda federalka Soomaaliya ugu wareejisay masuuliyadda 2,500 askari oo katirsan ciidanka Daraawiishta Puntland ee fadhigoodu yahay xerada General Maxamed Dirir (Ex- 54-aad), ee magaalada Garowe. Munaasabad haatan ka socota xarunta xeradaas ayaa hadalkaan wareejinta ciidanka waxaa ku dhaawaqay madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland, Eng. Camey. Waxaa goobta wasiir udowlaha ...
Madaxweynaha Puntland oo Boosaaso Ku daah-furay Mashruuca Caafimaadka Aasaasiga ah Ee Gobolada Bari Iyo Gardafuu Puntland(SAWIRRO).
September 17, 2017	Leave a comment 70 Views
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta 17 September 2017 ku daah-furay magaalada Boosaaso mashruuca caafimaadka aasaasiga ah ee gobolada Bari iyo Gardafuu Puntland. Daah-furka Mashruucani ayaa waxaa Madaxweynaha ku wehelinaayey Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Puntland iyo madaxda kale ee Wasaaraddaasi, masuuliyiin ka tirsan golaha xukuumadda Puntland, masuuliyiin ka tirsan Madaxtooyada Puntland, Xubno ka socdey hay’adda UNICEF, Isimo, ...
(SAWIRRO)Madaxweynaha Puntland oo Dalka Dib Ugu Soo Laabtay, Kana Soo Degey Magaalada Boosaaso.
Madaxweyna Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wefti balaadhan oo uu hogaaminayo ayaa maanta 15 September 2017 dalka dib ugu soo laabtay, kadib gudashada rukniga diiniga ah ee Xajka. Madaxweynaha iyo weftigiisa oo kaso degey magaalada Boosaaso ayaa waxaa kusoo dhoweeyey garoonka diyaaradaha magaaladaasi, maamulka gobolka Bari iyo kan degmada Boosaaso, masuuliyiin ka tirsan goleyaasha dawladda Puntland, saraakiisha ...
Ururka Takfiirka oo Puntland Go’aan ay ka Qaadatay iyo Arimo layaab leh oo ay caruurtu ku Sameeyaan(Akhriso)….
September 15, 2017	Leave a comment 60 Views
Shirka golaha Wasiirada Ee Puntland ayaa Looga hadlay Arimo badan oo ay ka midyihiin amniga deegaanada Puntland ,Urur diimeedka Takfiirka oo dowlada Puntland ay sheegtay in ay arimo badan oo dhibaato ah u gaystaan qoysaska kunool Puntland Siiba caruurta yaryar oo ay qariyaan oo la geeyo goobo kale.
Warbixin Xasaasi ah:Amnigii Soomaaliya oo isbadal ku dhacay iyo Alshabaab oo soo celiyay Weeraradii hore…
September 14, 2017	Leave a comment 46 Views
Isbedel weyn ayaa ku yimid amniga Soomaaliya, si gaar ah Al- Shabaab ayaa kordhiyey weerarada ay ku qaadayaan xarumaha iyo Saldhigyada ciidamada DF & Saaxiibadooda caalamiga ah ee AMISOM, taas oo ka dhigan fariin adag oo waqti xun kusoo beegantay. Mana ahan in qolyo cusub ay soo galeen. Waa isla dhinacyadii Soomaaliya isku hayey ee kala ahaa al Shabaab oo ...
Sawirro Murugo leh Hooyo Soomaaliyeed iyo Wiilkeeda oo Mudo 3 sano ah darbi jiif ahaa Ingiriiska (Akhri Sababta).
September 13, 2017	Leave a comment 37 Views
Hooyo Soomaali iyo wiilkeeda oo hoy la’aan ah ayaa darbi jiif ku ah waddo ku taal magaalada London ee dalka Ingiriiska, kaddib markii laga soo saaray guri ay degenaayeen. Hooyadan iyo wiilkeeda ayaa muddo saddex sano hoy la’aan ah, waxaa gurigii ay degenaayeen laga soo saaray sanadkii 2014, kaddib markii ay ku guuldareysteen inay iska bixiyaan kiradii guriga. Mid ka ...
Madaxweynaha Puntland oo Ka Gayb Galay Gunaanudka Tartanka Quraanka Kariim Ka ah ee Heer Puntland(SAWIRRO).
June 18, 2017	Leave a comment 32 Views
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta 18 June 2017 ka qayb galay gunaanudka tartanka Quraanka Kariim ah ee heer Puntland oo lagu soo xidhay Masjidu Huda ee Magaalada Garoowe. Munaasimada lagu gudoonsiinayey ardayda kaalmaha hore ka gashay tartanka Quraanka Kariim ka ah Jaa’isooyinka ayaa waxaa madaxweynaha ku wehelinaayey Wasiirka Wasaaradda Cadaalada Saalax Xaabib Jaamac, Guddiga qaban ...
Madaxweynaha Dawladda Puntland oo Ka Qayb Galay Xuska Maalinta Caruurta Africa(SAWIRRO)
June 17, 2017	Leave a comment 27 Views
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta 17 June, 2017 waxa uu ka qayb galay munaasabad lagu maamuusayay maalinta caruurta Africa oo ku beegan 16 June sanad kasta, waxaana munaasabaddaas si wada jir ah usoo qaban qaabiyay Wasaaradda Haweenka iyo Arrimaha Qoyska iyo Wasaaradda Waxbarashada Puntland. Madaxweynaha Dawladda Puntland oo kahadlay Munaasibadaasi ayaa mahad balaadhan u soo ...
Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Amniga Puntland oo Maanta Loo Dhaariyey Xilka.
June 17, 2017	Leave a comment 26 Views
Waxaa maanta oo ay taarikhdu tahay 17 June 2017 loo dhaariyey xilka Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Amniga Puntland Cadirashiid Cali Geelle oo dhowaan uu Madaxweynaha Dawladda Puntland u magcaabay xilkaasi. Munaasimada Dhaarinta Wasiiru Dawlaha oo ka dhacday qasriga Madaxtooyada Garoowe ayaa waxaa goob joog ka ahaa Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, xibin ka tirsan Maxkamadda Sare ee Puntland ...
Madaxwayne Gaas oo Furay Kal-fadhiga 39aad Ee Baarlaanka Puntland khudbad Xasaasi ahna jeediyay(SAWIRRO)
June 15, 2017	Leave a comment 37 Views
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta 15 June 2017 si rasmi ah u furay kal-fadhiga 39aad ee Baarlamaanka Dawladda Puntland. Furitaanka Kalfadhigani ayaa waxaa goob joog ka ahaa Gudoomiyaha Baarlaanka Puntland Mudane. Axmed Cali Xaashi iyo kuxigeenkiisa koowaad, Masuuliyiin ka tirsan goloyaasha dawladda Puntland, saraakiil ka tirsan Madaxtooyada dawladda Puntland, guddoomiyaha Maxkamada Sare ee Puntland, Wasiirka ...
Wasiirka Dib u Dhiska Iyo Horumarinta PL iyo Wasiiru Dowlaha Waxbarashada oo Maanta Loo dhaariyey xilalka(DHAGEYSO+SAWIRRO) .
June 12, 2017	Leave a comment 25 Views
Waxaa maanta oo taariikhdu tahay 12 June 2017 loo dhaariyey xilalka wasiirrnimo, Wasiirka Dib u Dhiska iyo Horumarinta Puntland Cabdikhadar Faarax Shaaciye iyo Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee PuntlandYaasiin Cabdi Seed, kadib markii madaxweynaha Dawladda Puntland uu kusoo daray Golaha Wasiirada Dawladda Puntland todobaadkii lasoo dhaafay . Munaasibada dhaarinta oo ka dhacday qasriga Madaxtooyada Garoowe ayaa waxaa ...
(SAWIRRO)Madaxweynaha Puntland oo ka qayb galay Shir Wadda-tashi Ah oo Ku Saabsan Nidaamka Xisbiyadda Badan ee Puntland.
June 11, 2017	Leave a comment 25 Views
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta magaalada Garoowe gaar ahaan xarunta PDRC kaga qayb galay shir wadda-tashi ah oo ku saabsan nidaamka xisbiyada badan ee Puntland. Madaxweynaha ayaa waxaa shirkaasi ku wehelinayey guddomiyaha Baarlamaanka Puntland Mudane. Axmed Cali Xaashi, guddiga ku meel-gaadhka ah ee doorashooyinka Puntland, masuuliyiin ka tirsan goloyaasha dawladda Puntland, saraakiil ka tirsan Madaxtooyada ...
Qaar kamida Wasiiiradda Cusub Ee Madaxweynaha Puntland Magcaabay oo maanta La Dhaariyey(DHAGEYSO+SAWIRRO)
June 7, 2017	Leave a comment 22 Views
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo goobjoog ka haa saaka 07 June 2017 munaasimad lagu dhaarinayey qaar kamida Wasiiradda cusub ee uu dhowaan magcaabay, munaasimada dhaarinta ayaa ka dhacday Qasriga Madaxtooyada Garoowe. Wasiiradda loo dhaariyey xilalka loo igmaday ayaa kala ah Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, Hiddaha iyo Dhaqanka Cabdiraxmaan Barkhad Warsame, Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Caafimaadka Cabdifataax Xasan ...
Madaxweynaha Puntland oo Xadhiga Ka Jaray Dhismaha Cusub ee Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Puntland(SAWIRRO)
June 6, 2017	Leave a comment 20 Views
Madaxweynaha Dawlada Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta gelinkii hore 06 June 2017 xadhiga ka jaray dhismaha cusub ee Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Puntland, kaas oo laga hirgeliyey dhismaheeda Caasimada Garoowe. Xadhig jarka dhismaha Wasaaradda ayaa waxaa madaxweynaha kuwehelinayey wasiirka Wasaarada Xanaanada Xoolaha Puntland, Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Xanaanada Xoolaha,Wasiir kuxigeenka Wasaaradaasi, shaqaalaha waaxaha Wasaaradda iyo saraakiil ka tirsan Madaxtooyadda ...
(DAAWO)Warbixin laga diyaariyay 100kii Maalmood Ee Madaxwayne Farmaajo iyo Xaalada Villa Soomaaliya Ee laga maamulo dalka.
June 6, 2017	Leave a comment 18 Views
8-dii bishii February ee sanadkan waa xiligii la doortay madaxweynaha DFS Maxamed Cabdullahi Farmaajo, waxaana laga joogaa ilaa 100 maalin inta uu fadhiyo Xarunta Madaxtooyadda Muqdisho. Mid kamid ah idaacadaha magaaladda Muqdisho ayaa warbixin cajiib ah ka diyaarisay wax qabadkii madaxweyne Farmaajo mudadii uu xilkaas hayay iyo waxyaabihii u qabsoomay. Warbixintan oo umuuqatay fariin ku socota shacabka magaaladda Muqdisho oo lagu ...
Wareysi Xasaasi ah Madaxwayne Farmaajo oo Arimo badan wax laga Waydiiyay Sida qaraxyada ,cunaqabateynta hubka,iyo arimo Xasaasi ah.
June 1, 2017	Leave a comment 20 Views
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu wareysigan uu kaga hadlayaa waxyaaba badan oo ay ka mid tahay, waxa u qabsoomay boqolka maalin ee uu xilka hayo, safaradii uu dibadda ugu baxay, dhismaha ciidamada, cunaqabateynta hubka, qaraxyada Muqdisho ka dhaca inuu maqlo iyo in kale, isbedelkii uu ballan qaaday halka uu maray, taariikhdiisa, noloshiisa qoyska, xaaskiisa sida ay isku barteen, kooxda ...
Qiimaynta Kaalinta Militeriga Soomaaliya uga Jiro Qaarada Africa iyo Wadanka Soomaaliya la barbar dhigay.
Dowladda Masar ayaa noqotay wadanka Afrika dhanka Ciidanka Millitariga ugu wanaagsan, waxaana ku xiga dalalka Algeria, Ethiopia, Nigeria iyo koonfur Afrika, kuwaasi oo iyaguna ka mid noqday dalalka dhanka Ciidanka Millitariga ugu wanaagsan Afrika. Warbixin ay soo saartay Hay’adda dunida u qaabilsan ogaanshaha awooda Ciidanka Millitariga ee (GFP) ayaa waxa ay ku sheegtay in Dowladda Masar ay tahay Dowladda Afrika ...
(SAWIRRO)Ra’iisulwasaare Khayre oo booqday Xarunta Taliska ciidanka Booliska sheegayna in uu ka mid ahaa…
May 31, 2017	Leave a comment 15 Views
Ra’iisal Wasaaraha Somaliya Xasan Cali Khayre, ayaa maanta booqday xarunta Taliska ciidanka Booliska Somaliyed, halkaasi oo uu kulan kula qaatay Saraakiisha ciidamada. Booqashada Ra’iisal Wasaaraha uu ku tagay xarunta Taliska ciidanka Booliska Somaliyed, ayaa waxaa ku wehlinaayay Wasiiro ka tirsan Xukuumadda iyo Xildhibaano Baarlamaanka ka mid ah. Taliyaha ciidamada Booliska Somaliyed General C/xakiin Daahir Saciid (Saacid) ayaa ku soo dhaweeyay ...
(AKHRISO+XASAASI)Wareysi uu Siiyay Madaxwayne Farmaajo Wargays carbeed oo banaanka soo dhigay Xogo qarsoon.
May 30, 2017	Leave a comment 24 Views
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo wareysi siinayay mid kamid ah Wargeysyada ugu afka dheer ee barriga Dhexe (Wargeyska Sharqal Awsat) ayaa daaha ka rogay mushaarka dawladdiisu bixiso, ciidamada cabanaya, waxyaabaha keenaya direyska ciidamada ee uu xirto iyo arrimo kale oo la xariira shaqadiisa. Saacadaha aad shaqeyso waa imisa Madaxweyne maalin kasta? Madaxweynuhu wuxuu cadeeyey in uu maalin kasta shaqeeyo ...
Puntland iyo DFS oo ay ka dhextaagan tahay iyo xukuumadda Farmaajo oo sheegtay in Puntland fashilisay shirkii (DHAGEYSO)
May 21, 2017	Leave a comment 24 Views
Wasiirka Kalluumeysiga Xukuumadda Soomaaliya C/raxmaan Cabdi Xaashi ayaa ku eedeeyay maamul goboleedka Puntland in ay fashiliyeen shir muhiim ahaa oo ay uga qeyb gali lahaayeen Jaziirada Seychelles. Shirkan ayuu sheegay Wasiirka in looga hadli lahaa heshiis laga gaaro sidii loo qeybsan lahaa Kalluunka loo yaqaano Tuunaha oo ka dhici lahaa Jaziirada Seychelles, waxa uuna ku ededeeyay maamulka Puntland in ay ...
(DHAGEYSO)Madaxweyne Farmaajo Oo Ka Hadlay Arrin Baraha Bulshada Aad Looga Hadal Hayey oo uu Sameeyay.
May 19, 2017	Leave a comment 24 Views
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaayo aya waxa uu ka hadlay arrin dhawaanahaan baraha bulshada aad looga hadal haayey oo ah in madaxweynahu go’aansaday in uu sawirkiisa halkuu kaga dhagnaa xafiiskiisa uu ku badalo sawirkii ALLAHA u naxariistee madaxweynahii ugu horeeyay Soomaaliya Aadan Cabdulle Cusmaan. Madaxweyne Farmaayo ayaa sheegay in uu kaga gol lahaa kolkuu sawirkiisa ku badalaayey ...
(DAAWO SAWIRRO)Madaxweyne Kuxigeenka Pl oo daahfuray Xeerka Da’yarta Puntland.
May 10, 2017	Leave a comment 24 Views
Madaxweyne Ku Xigeenka Puntland Ahna Sii Hayaha Xilka Madaxweynaha Eng. Cabdixakiim Xaaji Cabdullahi Cumar Camey ayaa manta May 10, 2017 waxa uu caasimadda Garoowe kaga qayb galay munaasabad ay soo qaban saabisay Wasaaradda Caddaalada Puntland oo lagu dah-furayey xeerka Da’yarta Puntland. Munaasabassa waxa sidoo kale ka qayb galay Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi iyo sidoo kale masuuliyiin kala duwan ...
(DEG DEG+SAWIRRO) Madaxweyne Gaas oo Saxiixay heshiiskii dekadda Boosaaso
Dawladda Puntland ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 6 April 2017 la saxiitay heshiis taariikhiya shirkada DPWORLD ee wadanka Isutaga Imaaraadka Carabta, heshiiskaas oo ku saabsan balaarinta dekada magaalada Boosaaso oo laga dhigi doono dekad casri ah oo la jaanqaada dekadaha waaweyn ee adduunka. Weftigii balaadhnaa ee Madaxweynaha Dawladda Puntland ku weheliyey safarkiisa shaqo ee goobjooga ka ahaa heshiiska maanta ...
(SAWIRRO) Madaxweynaha Dawladda Puntland oo Safar Shaqo U Aaday Dalka Isutaga Imaaraadka Carabta.
April 4, 2017	Leave a comment 28 Views
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wefti balaadhan oo uu hogaaminayo ayaa maanta 04 April 2017 safar shaqo u aadey dalka isutaga Imaaraadka carabta. Madaxweynaha iyo weftigiisa ayaa waxaa garoonka diyaaradaha kanooko ee magaalaga Garoowe ku sii sagootiyey gudoomiyaha koowaad iyo gudoomiyaha labaad ee Baarlamaanka Puntland, masuuliyiin ka tirsan goloyaasha dawladda Puntland iyo saraakiil ka tirsan Madaxtooyada ...
Madaxweynaha Dawladda Puntland oo xafiiskiisa ku Qaabilay Wafdi ka Socdey Bangiga Aduunka.
March 27, 2017	Leave a comment 17 Views
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta 27 March 2017 Xafiiskiisa Madaxtooyada Garoowe kulan kula qaatay wefti ka socdey Bangiga Aduunka. Madaxweynaha yaa waxaa kulanka ku wehelinaayey Masuuliyiin ka tirsan Wasaarada Maaliyada Dawladda Puntland iyo saraakiil ka tisan Madaxtooyada Puntland. Kulanka uu la yeeshay Madaxweynuhu weftigan ayaa waxaa lagaga arrinsanayey mashuuca hab Maamulka Xisaabaadka Dawladda Puntland Public ...
Madaxweynaha Dawladda Puntland oo Kulan La Yeeshay Dhalinyarada Puntland Iyo Kuwo Ka Socdey Maamul goboleeyada DFS(SAWIRRO).
March 24, 2017	Leave a comment 43 Views
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa Xalay fiidkii kulan kula yeeshay Qasrisriga Madaxtooyada Garoowe dhalinyara Puntland iyo dhalinkale oo ka socotey Maamul goboleedyada DFS. Kulanka ayaa waxaa madaxweynaha ku wehilinaayey Wasiirka Wasaarada shaqada iyo shaqaalaha, dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Dawladda Puntland , Agaasimaha Guud ee wasaaradaasi iyo saraakiil ka tirsan Madaxtooyada Dawladda Puntland. Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed ...
(DHAGEYSO+SAWIRRO)Madaxweyne Gaas oo Garoowe dib uguSoo laabtay Sheegayna Mashaariic badana la fulinayo.
March 22, 2017	Leave a comment 22 Views
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wefti balaadhan uu hogaaminayo ayaa maanta 22 Marcha 2017 Dalka dib ugu soo laabtay kana soo degey Casimada Dawladda Puntland ee Garoowe, halkaas oo si diiran loogu soo dhoweeyey Madaxweynaha iyo weftigiisa. Madaxweynaha iyo weftigiisa ayaa waxaa garoonka diyaaraha Kanooko ee magaalada Garoowe ku soo dhoweeyey Madaxweyne ku xigeenka Dawladda Puntland ...
Warbixin+Sawiro: Madaxweynaha Dawladda Putnlad Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo Maanta Kulan Gaara Laqaatay Wasiirka Arimaha Dibada Ee Wadanka Ethiopia.
March 18, 2017	Leave a comment 30 Views
Madaxweynaha Dawladda Putnlad Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo Maanta Kulan Gaara Laqaatay Wasiirka Arimaha Dibada Ee Wadanka Ethiopia. Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo maalmahii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada Dubai ee Wadanka Imaaraadka Carabta, halkaas oo u tegay hawlo shaqo oo la xiriira kobcinta kaabayaasha dhaqaalaha ee Puntland ayaa waxaa uu maanta soo gaadhay ...
(DHAGEYSO+SAWIRRO)Madaxweyne Gaas oo maanta Safar shaqo u Aaday Itoobiya iyo Imaaraadka .
March 10, 2017	Leave a comment 1,127 Views
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wefti Balaadhan oo uu hogaaminayo ayaa maanta 10 March 2017 safar shaqo ugu ambabaxay Dalalka Itoobiya iyo Imaaraadka Carabka, Kana duulay Magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland. Madaxweynaha Iyo weftigiisa waxaa garoonka diyaaradaha ee Boosaaso International Airport ku sii sagootiyey Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland Mudane Axmed Cali Xaashi, Masuuliyiin ka tirsan Goloyaasha ...
(SAWIRRO)Madaxweyne Farmaajo iyo Guterres oo wadajir bulshada caalamka ugu baaqay ka qeyb-galka gurmadka abaaraha Soomaaliya
March 7, 2017	Leave a comment 747 Views
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa maanta la kulmay Xog-yaha guud ee Qaramada Midoobey iyo wefdi uu hoggaaminayo oo yimid magaalada Muqdisho. Antonio Guterres Xog-hayaga guud ee Qaramada Midoobey markii uu yimid Muqdisho, waxaa soo dhoweeyey wasiirka Arrimaha Dibedda Soomaaliya kaddibna uu kulan gaar ah la qaatey madaxweynaha Soomaaliya. Madaxweyne JFS mudane Maxamed Cabdullaahi Faraamajo iyo Mudane Guterres ayaa ugu horreyn ka ...
(Daawo-Sawirrada)Xaflad Balaaran oo arday ka Qalin jabisay Jaamacada Culuumta Caafimaadka .
February 19, 2017	Leave a comment 423 Views
(Boosaaso-Puntsom.com)Maalinimadii shalay aheyd oo ay Taariiqda ku Astaysnayd 18-2-2016 Sabti ayaa waxaa kadhacay Hoolka jaamacada Culuumta Caafimaadka Ee Magaalada Boosaaso Xaflad qalinjabin oo ay ku qalinjabinayaan dufcadihii Bachelor in Clinical Nursing Bach 4,Bachelor in midwery Batch 2 Iyo Bachelor in Public Health Batch 1 oo Tiradoodu Qaarayso 59 Arday. Xafladaa waxaa ka soo qeyb galay Maamulka sare ee jaamacada,macalimiin,wasiir ...
“SAWIRRO”Kulan dhexmaray Farmaajo, Xasan SH, iyo Jawaari
February 15, 2017	Leave a comment 874 Views
Madaxweynaha J.F.S Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa mar kale madaxtooyada Soomaaliya kula kulmay madaxweynihii hore ee dalka mudane Xasa Sheekh Maxamuud oo ay ka wad hadleen xaaladda uu dalka marayo iyo fursadaha dowladda cusub heysato. Kulanka Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajiyo iyo madaxweynihii hore ee dalka Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, waxa ay uga hadleen xaaladda dalka ku sugan yahay, ...
(SAWIRRO)Madaxweyne Gaas oo Boosaaso Lagu Soo dhaweeyay Kana hadlay Isbadalka wadanka Kuyimaaday
February 11, 2017	Leave a comment 159 Views
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wefti balaadhan oo uu hogaaminayo ayaa maanta 11 February 2017 dalka dib ugu soo laabtay kana soo degey magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland. Weftiga Madaxweynaha ayaa waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland Mudane. Axmed Cali Xaashi, masuuliyiin ka tirsan goloyaasha Dawladda iyo saraakiil ka tirsan Madaxtooyada Dawladda Puntland. Madaxweynha ...
Xaruntee lagu Qabanayaa Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya”Warbixin
February 5, 2017	Leave a comment 101 Views
MUQDISHO:- Sida uu qorshuhu ahaa Doorashada Madaxweynaha ayaa waxaa lagu waday in lagu qabto xarunta General Kaahiye ee Magaalada Muqdisho, balse hada waxaa soo baxaya warar sheegaya in loo bedelay xarun kale. Sarakiil ka agdhow Guddoonka Baarlamaanka iyo Guddiga Doorashada ayaa ayaa inoo sheegay in fikradaha lasoo jeediyey ay u badan tahay in lagu qaban doono xerada Ciidamada cirka Afisyoone ...
(SAWIRRO+Warbixin)Madaxweynaha Puntland oo Booqday Xarumaha Dawladda ee Degmada Bandar-Bayla Lana Kulmay Golaha Deegaanka Degmadaas.
January 28, 2017	Leave a comment 352 Views
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ku sugan degmada Bandar-Bayla ee gobolka karkaar ayaa maanta 28 January 2017 kormeeray xarumaha Dawladda degmada Bandar-bayla ee gobolka karkaar, isla markaana xariga ka jaray waddo halbowle ah oo dhawaan laga hirgeliyey magaaladaasi. Ugu horayn Madaxweynaha Dawladda Puntland ayaa xariga ka jaray waddo halbowle ah oo ah 1-km iyo 800 oo ...
(DAAWO)Madaxwayne Gaas oo daahfuray gargaarka loo fidinaayo dadka abaartu saamaysay ee ku soo hayaamay degaanada gobolada Bari iyo Karkaar.
January 26, 2017	Leave a comment 221 Views
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta 25 January 2017 magaalada xiriiro ee gobolaka bari ka daahfuray gargaarka loo fidinaayo dadka abaaruhu saameyeen ee ku soo hayaamay degaanada gobolada karkaar iyo Bari. Daahfurka ayaa waxaa madaxweynaha ku wehelinaayey masuuliyiin ka tirsan goloyaasha Dawladda Puntland, masuuliyiinta gobolada Bari iyo Karkaar, saraakiisha ciidamada Puntland iyo sariil ka tirsan Madaxtooyada ...
(WARMURTIYEED)Shirka Golaha Wasiirada Dawladda Puntland oo Ka Qabsoomay Magaalada Boosaaso iyo arimo badan oo looga hadlay.
January 5, 2017	Leave a comment 134 Views
(DHAGEYSO+SAWIRRO)Madaxweynaha Puntland oo Siweyn loogu Soo dhaweeyay Boosaaso Arimo badana ka hadlay.
January 3, 2017	Leave a comment 314 Views
Madaxweynaha Dowladda Puntland ayaa siweyn loogu soo dhaweeyay magaalada Boosaaso,waxaana madaxweynaha soo dhaweyntiisa ka qayb qaatay golayaasha dowladda Puntland iyo maamulka gobolka Bari. Madaxweyne Gaas ayaa ka tacsiyeeyay masuuliyiintii sare ee lagu dilay gudaha magaalada Boosaaso ,waxa uu sheegay in codowga dhibka wadana ay iska celinayaan. Sido kale madaxweynaha ayaa ka hadlay waxyaabihii ay madasha qaranka ay qabteen iyo diyaar garowga loogu jiro doorashada Soomaaliya. ...
dooni maraysay xeebta Jakarta oo 23 qof ugu geriyodeen Dab ka kacay
January 2, 2017	Leave a comment 100 Views
(PUNTSOM)Ugu yaraan 23 qof ayaa u dhimatay 17 qof oo kalana waa la la’yahay kaddib markii uu dab qabsaday doon maraysay xeebta magaalada Jakarta ee caasimadda waddanka Indonesia. Doonta Zahro Express ayaa waxa ay in ka badan 230 oo qof u waday jasiiradda Tidung ee loo tamashlaha tago, taasi oo 50km u jirta magaalada Jakarta. Saraakiisha ayaa sheegay in dabka ...
(Sawirro+Warbixin)Kulan looga hadlayay Nabadeynta Magaalada Gaalkacyo oo Muqdisho ka dhacay .
January 1, 2017	Leave a comment 287 Views
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed cali Gaas oo hawlo shaqo u jooga magaaladda Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa maanta 01 January 2016 kulan lagaga hadlayey nabadaynta magaalada Gaalkacayo kula yeeshay Muqdisho Madaxweynaha Maamulka Galmudug Cabdixakiin Xuseen Guuleed. Kulanka lagaga arrin sanayey xasiloonida iyo nabadaynta magaalada Gaal kacayo ayaa waxaa goob-joog ka ahaa Madaxweynaha Dawladda Fadaraalka Soomaaliya mudane Xasan Shiikh ...
(SAWIRRO+WARBIXIN)Madaxwayne Gaas oo muqdisho kulan kula qaatay maanta Danjiraha Dawladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya.
December 31, 2016	Leave a comment 201 Views
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo hawlo shaqo u jooga Casimada Soomaaliya ee Muqdisho ayaa Maanta 31 December 2016 waxa uu kulan kula qaatay magaalada Muqdisho danjiraha Dawladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya. Kulankan oo kadhacay xarunta safaarada Turkiga ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa madaxweynaha iyo danjire Oglan Bekar kaga wadahadleen arrimo la xiriira xiriirka soojireenka ee Dawladda ...
(SAWIRRO+WARBIXIN)Taliyaha Booliska Puntland oo so gabo-gabeeyay Tirokoobida Ciidamada Booliska Gobalka Mudug
December 31, 2016	Leave a comment 270 Views
Taliyaha Ciidamada Booliska Puntland Jen.C/qaadir Shire Faarax (Erag) ayaa so gabo-gabeeyay Wajigii kobaad ee tirokoobida Ciidamada Booliska Gobalka Mudug kadib Muddo Todobo cisho ah oo ku sugnaa Gobalka Mudug. Taliyaha Ciidamada Booliska Puntland Jen.C/qaadir Shire Faarax (Erag) ayaa inta uu u sugnaa Gobalka Mudug maray Degmooyinka Xarfo,Gaalkacyo,Galdogob,Saaxo,Jariiban,Tawfiiq iyo Dhamaan’ba Deegaannada Degmooyinkaasi hoostaga. Taliyaha Ciidamada Booliska Puntland Jen. Erag ayaa kormeekiisa ...
(DAAWO+DHAGEYSO)Taliyaha Ciidamada Booliska Puntland Jen. Erag oo gaarey Degmadda Jariiban ee Gobalka Mudug.
December 27, 2016	Leave a comment 362 Views
Taliyaha Ciidamada Booliska Puntland Jen.C/qaadir Shire Faarax Erag ayaa Maanta gaaray degmada Jariiban ee Gobalka Mudug kadib tiro-koob u ku sameeyay Ciidamada Booliska ee ka howl-gala Deegaannada Hoosyimaada Degmadaaasi.. Taliyaha Ciidamada Booliska Puntland Jen Erag ayaa Safarkiisa Shaqo waxaa ku wehliya Saraakiil sare oo ka tirsan Ciidamada Booliska ee Puntland,kuwaaso qayb ka ah tirkoobida Ciidamada Puntland. Taliyaha Ciidamada Booliska Puntland ...
Trump oo Qaramada Midoobay Afka Ukala Furtay kuna Tilmaamay murugo socota.
December 27, 2016	Leave a comment 414 Views
(Puntsom.com)Madaxweynaha la doortay ee Maraykanka, Donald Trump, ayaa ku tilmaamay Qaramada Midoobay in ay tahay murugo socota. Qoraal uu ku baahiyey bogga uu ku leeyahay shabakadda Twitter-ka ayaa Trump ku sheegay in Qaramada Midoobay oo noqon kari lahayd mid wax tartaaa ay noqotay gole ay iskugu yimaadaan dadku oo ku haasaawaan wakhti fiicanna ku wada qaataan. Todobaadkii hore ayuu si ...
(DAAWO+DHAGEYSO)Taliyaha Ciidamada Booliska Puntland Jen Erag oo kormeeray Booliska Degmada Galdogob ee Gobalka Mudug.
December 24, 2016	Leave a comment 444 Views
Taliyaha Ciidamada Booliska Puntland Jen.C/qaadir Shire Faarax (Erag) oo Howlo shaqo u jooga Gobalka Mudug ayaa Maanta kormeeray Booliska ku sugan Deegaannada Beyra,Bursaalax iyo Degmada Galdogob oo ka wada tirsan Gobalka Mudug Taliyaha Booliska Puntland Jen.Erag ayaa waxaa kormeerkiisa ku wehliyay Taliyaha Qaybta Booliska Gobalka Mudug iyo Saraakiil kale oo ka tirsan Hogaanka Taliska Booliska Puntland,kuwaaso qayb ka ah Tirakoobida ...
(DHAGEYSO) Waa Kuwee Musharaxiinta Ugu cad cad Qabashada Xilka Madaxwayne Ee Soomaaliya.
December 24, 2016	Leave a comment 710 Views
Waxaa caasimada Soomaaliya Ee Muqdisho, mudooyinkan dambe laga dareemayaa loolanka Musharaxiinta Xil raadiska ah EE Soomaaliya. Warbixin ay diyaarisay Laanta Afsoomaaliga VOA ayaa lagu sheegay in Musharaxiinta ugu cad cad doorashada ay ka mid yihiin Madaxweynaha Soomaaliya Ee waqtigiisu dhammaadey,Raiisul Wasaare cumar,iyo Madaxweynaha koonfurgalbeed Shariif Xasan. Sido kale waxaa ku soo xiga Musharaxiinta ay ka mid yihiin Madaxweynihii hore Ee Soomaaliya Sheekh Shariif iyo Siyaasiyiinta ...
(SAWIRRO)Taliyaha Ciidamada Booliska Puntland oo Maalinkii Labaad Gaalkacyo ka wada Tirokoobida Ciidamada Booliska Gobalka Mudug.
December 22, 2016	Leave a comment 304 Views
Taliyaha Ciidamada Booliska Puntland Jen.C/qaadir Shire Faarax (Erag) oo Howlo Shaqo iyo Tirakoobida Ciidamada Booliska Puntland u jooga Magaalada Gaalkacyo ayaa Maanta kormeeray Saldhiga Miir,Xarunta Ciidamada SPU,kantaroolka Bari iyo Xarumo kale oo dhamaantood Ciidamadii jooogay u tirokoobid ku sameeyay. Taliyaha Ciidamada Booliska Puntland Jen.C/qaadir Shire Faarax (Erag) ayaa inta uu ku guda jiray kormeerkiisa,waxaa uu Tirakoobid ku sameeyay Ciidamada Booliska ...
(SAWIRO+WARBIXIN)Siyaasi Cali Cabdi Awaare oo Xildhibaanad Ilhan Cumar soo dhaweyn ugu sameeyay Muqdisho
December 22, 2016	Leave a comment 574 Views
Siyaasi Cali Cabdi Awaare oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa magaaladda Muqdishu caasimadda Dowladda Federalka ee Soomaaliya ku qaabilay gabadhii ugu horreysay ee Soomaali ah oo ka mid noqotay golaha wakiillada Xisbiga Dimoquraadiga dalka Mareykanka Ilhaan Cumar oo dhawaan soo gaartay Muqdishu. Kulanka oo ah mid qado-sharaf ayaa sidoo kale waxaa ka qeyb galay Madax ka tirsan Dowlada Federalka ...
SAWIRRO+DHAGEYSI:-Taliyaha Booliska Puntland oo kormeeray Xarumaha Booliska ee Gobalka Mudug.
December 21, 2016	Leave a comment 112 Views
Taliyaha Ciidamada Booliska Puntland Jen. C/qaadir Shire Faarax (Erag) iyo Saraakiil u hogaaminayo oo gaaray Magaalada Gaalkacyo ayaa Maanta kormeeray ku sameeyay Saldhigyada Ciidamada Booliska ee Gobalka Mudug. Jen.Erag ayaa kormeekiisa ka bilaabay Taliska qaybta Booliska Gobalka Mudug oo u Warbixin kaga dhagaystay Taliyaha Qaybta Booliska G/dhexe C/waaxid Aw-doon oo tilmaamay in Ciidamada Gobalka si weyn uga shaqeeyan Ilaainta Amaanka. ...
(DHAGEYSO)Madaxweynaha Puntland oo Ka Qayb galay baaq ay ka soo Saareen Madasha Qaranku Abaaraha Baaxadaleh ee Ka Jira Soomaaliya.
December 21, 2016	Leave a comment 256 Views
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo hawlo shaqo u jooga caasimada Soomaaliya ayaa shalay gelinkii danbe 20 December 2016 ka qayb galay baaq ay ka jeediyeen madasha wada tashiga qaran abaaraha baaxadaleh ee ka jirah Soomaaliya, ila markaan alaga dhawaaqay gudi heer qaran ah oo ka shaqyn doona gurmadka abaraha. Shirkan ayaa waxaa sidoo kale ka qayb ...
WARBIXIN+SAWIRO Madaxweynaha Dawladda Puntland oo Muqdisho kula kulmay ku Simaha Danjiraha Imaaraadka U Fadhiya Soomaaliya.
December 19, 2016	Leave a comment 215 Views
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo hawlo shaqo u jooga Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa maanta 19 December 2016 kulan kula qaatay Magaalada Muqdisho ku simaha danjiraha Imaaraadka u fadhiya Soomaaliya. Kulanka oo ka dhacay xarunta safaarada Imaaraadka ee Muqdisho ayaa waxaa lagaga wada hadlay wanaajinta xidhiidhka ka dhexeeyey Dawladda Imaaraadka iyo Dawladda puntland, sii amba ...
(SAWIRO)50 Dhalinyaro ah oo xirfado shaqo-abuur loogu sameynayo magaaladda Bosaaso markii 3aad
December 15, 2016	Leave a comment 275 Views
Hay’adda SOVOYODO ee ka shaqeysa arimaha dhalinyaradda Soomaaliyeed ayaa markii 3aad Xirfado shaqo u abuuraysa dhalinyaro 50 ah kuwaas oo isuga jira wiilal iyo gabdho. Xirfadahaan oo ah kuwa kala duwan isla markaana lagu barayno Dawaarka,Korontadda,Shaqo-guri iyo weliba soo dhaweynta ayaa xafladii lagu furayey waxa ay ka dhacday Hotel Tropical ee magaaladda Boosaaso. Masuulyiin ka tirsan Dowladda,Maamulka Hay’adaha SOVOYODO, SOCA,Waalidiin,arday ...
SAWIRRO+WARBIXIN :- Shirka Golaha Wasiiradda Dawladda Puntland oo lagu ansixiyey misaaniyada 2017 ee Dawladda Puntland iyo Xeerka Degaanka.
December 11, 2016	Leave a comment 196 Views
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta 11 December 2016 shir gudomiyey Shirka golaha wasiiradda ee Dawlada puntland. Shirka golaha wasiiradda ee Dawladda Puntland ayaa waxaa manta lagaga arinsaday ansixinta misaaniyada 2017 ee Dawladda Puntland, ansixinta xeerka ilaalinta iyo maaraynta degaanka ee Dawladda Puntland iyo sidoo kale Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka ...
(SAWIRO+WARBIXIN)Madaxwayne Gaas oo Caasimada Kenya kulan Kula Qaatay Safiirka Hindiya u Fadhiya Soomaaliya iyo madaxa Bangiga Aduunka.
December 10, 2016	Leave a comment 171 Views
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wefti uu hogaaminayo ayaa maanta 09 December 2016 kulan kula qaatay magaalada Nairobi ee caasimada wadanka Kenya Safiirka Hindiya u fadhiya Soomaaliya iyo Madaxa bangiga aduunka. Kulanka ay madaxweynaha iyo weftigiisu la qaateen safiirka Hindiya iyo Madaxa Bangiga aduunka ayaa waxa lagaga wada hadlay arimo laxiriira doorashooyinka Soomaaliya gaar ahaan kuwa ...
WARBIXIN+SAWIRO:- Madaxweynaha Dawladda Puntland oo magaalada Nairobi kula kulmay Danjirayaasha dalalka Maraykanka, Jarmalka iyo Talyaaniga u fadhiya Dalka Soomaaliya.
December 9, 2016	Leave a comment 45 Views
(PUNTSOM.COM)Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wefti uu hoggaaminayo oo hawlo shaqo u jooga Dalka Kenya ayaa maanta 09 December 2016 kulan kula qaatay magaalada Nairobi Safiirda Soomaaliya u fadhiya dalalka Jarmalka, Maraykanka iyo Talyaaniga. Kulankan uu Madaxweynahu la qaatay safiiradaasi ayaa waxa ay uga wada hadleen arrimo la xiriira Dorashooyinka Soomaaliya, mashaariicaha horumarineed ee ...
(SAWIRO) Madaxweyne ku xigeenka koobaad oo maanta Shir Gudoomiyay Shirka Golaha Wasiirada Jubbaland .
December 8, 2016	Leave a comment 257 Views
Shirka Golaha Wasiirada Dowlada Jubbaland ee Soomaaliya waxaa saaka Shir Gudoomiyaya Madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan waxaana ka soo qayb galay inta badan Xubnaha Golaha ee aan hawlaha shaqo dalka kaga maqnayn. Wasaarada Amniga ayaa soo bandhigtay qorshaha tayaynta Ciidamada iyo Hay’adaha amaanka oo ay kamid tahay kordhinta Mushaaradka iyo gunooyinka ay Askartu qaatan iyadoo Golahu uu ka ...
Sheeko Xiiso Leh Nin Tanzaniya u dhashay oo xayeysiiyay inuu raadinayo xaas Tilmaamo gaar ah leh
December 6, 2016	Leave a comment 100 Views
(Tanzaniya-Puntsom.com)Nin 75 sano jir ah oo u dhashay dalka Tanzaniya ayaa billaabay baaritaan uu ku turxaan bixinaayo xaas cusub ka dib markii afadiisii hore ay dhimatay. Cusmani Mchambua ayaa sameeyay boorar xayeysiimo ah oo uu ku dhejiyay nawaaxiga Mbagala ee magaalada Dar es Salaam. Wuxuu dumarka daneynaya guurkiisa ugu baaqay inay wareysi iyo imtaxaan u yimaadaan. Xayeysiinta oo luqadda ...
SAWIRRO+ DHEGAYSO:-Taliyaha Booliska Puntland General Erag oo kormeeray Dekada Bosaso,Kantarool-ka Laag,kan laga galo Bosaso ,Deegaanka Qow iyo Goobo kale.
December 5, 2016	Leave a comment 289 Views
Taliyaha Ciidamada Booliska Puntland Jen. C/qaadir Shire Faarax Erag oo wali ku guda jira Kormeero uu ku kala bixinayo Xarumaha Booliska Gobalka Bari ee Puntland ayaa maanta tagay Deegaanka Qow oo Qiyaastii 40 KM u jira Magaalada Bosaso ee Xarunta Gobalka Bari. Taliyahaya ayaa u jeedka kormeekiisa Qow ku sheegay Tirakoobida Ciidama Booliska ee Deegaankaasi iyo bixinta wacyigalin la xiriirta ...
(SAWIRRO)Taliyaha ciidanka booliska Puntland oo kormeeray saldhigyo ciidan.
December 3, 2016	Leave a comment 249 Views
Taliyaha ciiidanka Boolis-ka dowlada Puntland Eng C/qaadir Shire Faarax Erag ayaa kormeero uu kuura-galayo Tayada iyo Tiradda Ciidamada Booliska Puntland uu ku maraya Deegaano ka tirsan Goballada Nugaal iyo Bari. Ujeedka Kormeerka Taliyaha Ciidamada Booliska Puntland Eng C/qaadir Shire Faarax Erag ayaa salka ku haya, ogaanshaha Gudashada Waajibaadka shaqo ee Booliska Degmooyinka Puntland,Tirakoobaka Ciidamada,ku wacyigalinta Ciidamada in ay yihiin shaqaalaha ...
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya’dalka Waxa U baahan yahay Isbadal .
December 3, 2016	Leave a comment 192 Views
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ayaa sheegay in dalka Soomaaliya uu u baahan yahay isbedel dhanka hogaanka ah, kadib markii uu la kulmay xildhibaano lasoo doortay. Cumar C/rashiid ayaa hadalkaan ka jeediyay magaalada Kismaayo, markii uu la kulmay xubnaha aqalka sare ee maamulka Jubbaland matalaya. Xildhibaanada aqalka sare ayuu u sheegay ra’iisul wasaaraha in loo baahan yahay iney eegaan hogaanka ...
Shirka dib U eegista Waxbarashada Puntland oo kusoo gabagaboobay magaalada Garoowe.
December 1, 2016	Leave a comment 104 Views
Shirweynihii dib u eegista Waxbarashada Puntland oo maalintii 29-Nov-2016 ka furmay xarunta horumarinta cilmi baarista Puntland ee PDRC ayaa galabtay la soo gebo gabeeyey. Shirka ayaa labadii maalmood ee uu socday waxaa dib u eegis lagu sameeyey waxyaabihii qabsoomay,waxyaabihii aan qabsoomin islamarkaana la soo bandhigo horumarka waxbarasho ee la gaaray sanadkii 2015-2016. Ka qayb-galayaasha shirka ayaa soo jeediyey in la ...
WARBIXIN+SAWIRO:- Madaxweyne Ku Xigeenka Dawladda Puntland oo Daah-furay Shirweynihii Saddexaad ee Waxbarashada Puntland.
November 29, 2016	Leave a comment 184 Views
Madaxweyne ku xigeenka Dawladda Puntland ahna sii hayaha xilka madaxweynaha Eng. Cabdixakiin Xaaji Cabdillaahi Cumar Camey ayaa maanta 29 November, 2016 waxa uu si rasmi ah u dah-furay shirweynihii saddexaad ee waxbarashada Puntland. Madaxweyne ku xigeenka waxaa shirka kala qayb galay masuuliyiin ka tirsan golayaasha Dawladda, masuuliyiin ka mid ah hay’adaha Dawladda iyo saraakiil ka tirsan Madaxtooyada Dawladda Puntland. Shirweynaha ...
(SAWIRO+WARBIXIN)Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo Qasriga Madaxtooyada Garoowe ku qabilay safiirka midowga yurub u qaabilsan Soomaaliya.
November 29, 2016	Leave a comment 195 Views
Madaxweyne ku xigeenka Dawladda Puntland ahna kusimaha madaxweynaha Eng Cabdixakiin Xaaji Cabdulaahi Cumar Camey ayaa maanta 29 November 2016 Madaxtooyada Garoowe ku qaabilay wafti ay hoggaaminayso safiirka midowga yurub u qaabilsan Soomaaliya ambassador Mss Veronique Lorenzo. kulankan uu la qaatay madaxweyne ku xigeenku safiirka midowga yurub u qaabilsan Soomaaliya ayaa waxaa ku weheliyey masuuliyin ka tirsan golloyaasha Dawlada Puntland iyo ...
(SAWIRRO+ WARBIXIN)Madaxweynaha Dawladda Puntland oo Si Diiran Loogu Soo Dhoweeyey Dalka Chaina.
November 28, 2016	Leave a comment 187 Views
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wafdi uu hogaaminayo oo safar shaqo ugu anba baxay dalka Chaina ayaa si diirran loogu soo dhoweeyey caasimadda dalkaasi ee Shanghai. Madaxweynaha waxaa safarka ku weheliya masuuliyiin ka tirsan Golayaasha Dawladda Puntland, masuuliyiin ka tirsan hay’adaha dawladda iyo saraakiil ka mid ah madaxtooyada Dawladda Puntland. Madaxweynaha Dawladda Puntland iyo wafdigiisa waxaa ...
DHAGEYSO:-Guddiga Abaaraha Puntland oo lagu Wareejiyey 100.000 oo doolar.
November 28, 2016	Leave a comment 165 Views
Boosaaso):-Guddiga abaaraha Puntland ayaa maantey waxaa lagu wareejiyey lacag gaareysa boqol kun($100.000) oo doolarka Mareykanka ah . Lacagta ayaa Waxaa guddiga abaaraha Puntland, gaar ahaana culimada ku wareejisay shirkada dahab shiil Group oo ka qayb qaadaneysa caawinta dadka abaaraha ay saameeyeen. Munaasabada lacagta lagu wareejinayey guddiga abaaraha ayaa ka dhacdey magaalada boosaaso,waxaana ka gudoomay culimada qaybta ka ah gurmadka loogu gurmanayo dadka ay ...
November 27, 2016	Leave a comment 125 Views
(SAWIRO+WARBIXIN)Wasiir Ku Xigeenka Dakhliga ee Wasaarada Maaliyadda Dawladda Puntland iyo Xibin Ka Tirsan Maxkamada Sare oo La Dhaariyay.
November 27, 2016	Leave a comment 206 Views
Waxaa saaka 27 November 2016 qasriga madaxtooyada Garoowe lagu dhaariyey wasiir kuxigeenka dakhliga ee wasaarada maaliyada Dawladda Puntland mudane Maxamed Jibriil Caateeye iyo xubin ka tirsan maxkamadda sare ee Dawladda Puntland Maxamed Cumar Axmed. Munaasabadda dhaarinta ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Madaxweyne ku xigeenka Dawladda Puntland ahna ku simaha Madaxweynaha Eng. Cabdixakiin Xaaji Cabdullaahi Cumar Camey, masuuliyiin ka tirsan maxkamada ...
WARBIXIN+SAWIRO:- Guddiga Abaaraha Puntland oo Baaq si wada-jir ah ugu Diray guud ahaan Ummadda Soomaaliyeed iyo Beesha Caalamka.
November 26, 2016	Leave a comment 172 Views
Madaxweyne ku xigeenka Dawlada Puntland ahna gudoomiyaha guddiga abaaraha Puntland Eng. Cabdixakiin Xaaji Cadulaahi Cumar Camey oo ay wehelinayaan gudiga abaaraha Punrland ayaa maanta 26 November 2016 baaq u diray ummadda soomaliyeed gaar ahaan shacab reer puntland sidii loogu soo gurman lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen. Madaxweyne ku-xigeenka Dawladda Puntland ahna ku simaha madaxweynaha ayaa ka warbixiyey xaaladda abaareed ee ...
WARBIXIN+SAWIRO:- Madaxweynaha Dawladda Puntland oo Ka Qayb Galay Aas Qaran oo Loo Sameeyey Marxuum Xildhibaan Daahir Xaaji Geelle .
November 23, 2016	Leave a comment 255 Views
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo maanta 23 Nevember 2016 ka qayb galay aas qaran oo magaalada Garoowe loogu sameeyey Illaahay ha’u naxariistee xildhibaan Daahir Xaaji Geelle oo ka mid ahaa xidhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya. Aaska qaran ee loo sameeyey saaka Illahay ha’u naxariitee xildhibaan Daahir Xaahi Geelle ayaa waxaa Madaxweyanah ku wehelinaayey Madaxweyne ku ...
WARBIXIN+SAWIRO:- Madaxweynaha Dawladda Puntland oo Qasriga Madaxtooyada Garoowe Ku Qaabilay Saraakiil Ka Socotey Xafiiska Siyaasada Q.M ee UNSOM Puntland.
November 22, 2016	Leave a comment 255 Views
Madaxweynaha Dawllada Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta 22 November 2016 qasriga madaxtooyada ee magaalada Garoowe ku qaabilay wefti uu hogaaminayey madaxa xafiiska UNSOM Puntland Mr. Aaward Bell. Mr. Aaward Bell iyo weftiga uu hogaaminayo ayaa Madaxweynaha Dawladda Puntland waxaa ay ka wada hadleen arrimo la xidhiidha doorashooyinka, abaaraha kajira Puntland iyo xaaladaha guud ee Soomaaliya. Weftigan ka ...
Imaaraadka Carabta oo ku Fashilantay Qorshe ay u dagtay Xasan Shiikh” Warbixin
November 22, 2016	Leave a comment 411 Views
MUQDISHO: Safiirka dowlada Imaaraadka Carabta u fadhiya Somalia oo muddo bil ka badan ku sugnaa magaalada Nairobi ayaa waxaa la soo deristay xaalad adag ka dib markii uu ku fashilmay qorsheyaal ka dhan ah soo laabashada Madaxweyne Xasan oo uu halkaas u joogay. Safiirka dowlada Imaaraadka ayaa dowlada Kenya kala hadlay qorshe uu watay oo ku saabsan in Cumar C/rashiid ...
(SAWIRO+WARBIXIN)Madaxweynaha Dawladda Puntland oo Ka Qayb Galay Isu Soo Bixii Roob Doonta ee Ka Dhacay Maanta Magaalada Garoowe.
November 21, 2016	Leave a comment 269 Views
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta 21 November, 2016 waxa uu ka qayb galay isu soo bixii roob doonta ee ka dhacay duleedka magaalada Garoowe. Madaxweynaha Dawladda Puntland iyo bulshada caasimadda Garoowe ayaa waxay duleedka Garoowe ku tukadeen Salaadda roob doonta, iyaadoo Madaxweynuhu uu ilaahay Subxaanahu Watacaalaa ka beryay inuu umaddiisa ka dul qaado abaarta iyo ...
Maxaad ka Taqanaa Maalinta Macalinka” Warbixin?
November 21, 2016	Leave a comment 219 Views
Maalinta waxa ay ku began tahay 21 Novembar 2016 maalinta macalinka Soomaaliyeed 21 Nonember sanadkii 1974-tii dowladii Soomaaliya ee berigaasi jirtay u aqoonsatay maalinta macalinka Soomaaliyeed, waa maalinta qaran ee dalka loo asteeyey Maalinta Macallinka Soomaaliyeed, maatna oo kale Soomaaliya waxaa la fasaxay dhamaan dugsiyada si loo xuso kaalinta macaallinka. Macalinka oo aan La Qiimaynin Qiimihii iyo sharafkii uu lahaa macalinka ...
(SAWIRRO+WARBIXIN)Madaxweynaha Dawladda Puntland oo Garoowe Dib ugu soo Laabtay.
November 20, 2016	Leave a comment 211 Views
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wefti uu hogaaminayey oo arimo la xiidhiidh xalinta iyo nabadaynta Magaalada Gaalkacayo u joogey ayaa maanta 20 November 2016 waxaa uu soo gaaray Caasimada Dawladda Puntland ee Garoowe haalkaas oo si balaadhan loogu soo dhoweeyey. Madaxweynaha Dawllada Puntland iyo weftigiisa ayaa waxaa duleedka caasimada Garoowe ku soo dhoweeyey Maamulka Gobolka ...
WARBIXIN+SAWIRO Madaxweynaha Dawladda Puntland oo Kulan La Qaatay Guddiga Nabadaynta ee Magaalada Gaalkacayo.
November 19, 2016	Leave a comment 176 Views
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta 19 November 2016 kulan laqaatay guddiga nabadaynta magaalada Gaalkacayo ee Dawladda Puntland iyo maamulka Galmudug, guddigaas oo loo xilsaaray inat ka shaqeeyaan sidii xal loogu heli lahaa colaadda soo noq noqotay ee magaalada Gaalkacayo. Kulankan maanta uu gudigii nabadaynta la qaatay Madaxweynaha Dawladda Puntland ayaa waxaa ku weheliyey masuuliyiin ka tirsan ...
(SAWIRO+WARBIXIN)Madaxweynaha Dawladda Puntland oo Dallacsiiyay Saraakiil Ciidan oo Tababar Kusoo Qaatay Dalka Ethiopia.
November 19, 2016	Leave a comment 282 Views
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta 19 November, 2016 waxa uu dallacsiiyay saraakiil ka tirsan ciidamada daraawiishta Dawladda Puntland , saraakiishaas oo tababar ciidan oo mudo laba sano ah kusoo qaatay dalka Ethiopia. Saraakiishan oo ah lix sarkaal ayaa soo qaatay tababar dhamaystiran oo dhinaca ciidanka ah waxayna diyaar u yihiin inay u shaqeeyaan dadka iyo ...
Roob Doon Berri laga Samaynayo Magaalada Boosaaso
November 16, 2016	Leave a comment 81 Views
(Boosaaso-Puntsom) Maalinta barri ah oo ah Khamiis ah magaalada boosaaso waxaa ka dhacayso roob doon oo ay dadka isugu soo baxayaan isbartiinka oo loo iclaamiyay si ay dadka alle ugu baryaan in uu madar qeyr qabo siiyo. Roobdoonta waxaan ka soo qeybgalayo maamulka gobalka barri ,kan degmada boosaaso iyo culima udiinka magaalada si ay dadka ugu baraarujiyaan tuugmada alle isna ...
DHAGEYSO:-Wasiirka amniga Soomaaliya oo ku guuleystay xubinimada aqalka hoose iyo Xubnaha kale ee ladoortey.
November 16, 2016	Leave a comment 187 Views
Wasiirka amniga Soomaaliya Cabdirisaaq cumar Maxamed ayaa maantey ku guuleystay xubinimada aqalka hoose Ee uu kumatalayo maamulka Hirshabelle Ee ka dhacdey Jowhar. Wasiirka ayaa waxa uu ka guuleystay Cabdi Faray oo latartamayey waxa uuna kaga guuleystay Codad gaaraya 47 Cod. tartanka xubinimada aqalka hoose ee maamulka Hirshabelle ayaa waxaa maantey kuguuleystay 5 xubnood . Halkaan ka Dhagayso Cod Wasiirka Dhanka ...
(SAWIRO+WARBIXIN)Madaxweynaha Dawladda Puntland oo La Kulmay Guddigii uu u Magcaabay Xallinta Colaadda Gaalkacayo iyo Wakiilka Qaramada Midoobey ee Soomaaliya.
November 15, 2016	Leave a comment 434 Views
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta 15 Nov, 2016 la kulmay guddigii khilaafaadka Dawladda Puntland ay u wakiilatay kulamada ku salaysan nabadaynta magaalada Gaalkacayo, waxaana kulankaasi ka qayb galay Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo wakiilka gaarka ah ee xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Michael Keating. Kulankan maanta ka dhacay garoonka diyaaradaha magaalada Gaalkacayo ...
Dadkii ka Barakacay Dagaaladii Gaalkacyo oo Qaarkood sheegay in ay Magaalada Kunoqonaynin
November 14, 2016	Leave a comment 77 Views
(GALKACYO)Qaar ka tirsan dadkii dhawaan ku barakacay dagaaladii ka dhacay Gaalkacyo ayaa diiday inay dib ugu laabtaan magaaladaa. Dadkaa ayaa Qaarkood xero ka samaystay meel ka baxsan Gaalkayo oo lagu magacaabo Col Madoow Waxaa dadkaa oo u badan maato dumar iyo carruur ah sida a ay sheegeen in aysan ku laabanayn Gaalkacyo maadaama labadii ciidan aan lakala qaadin. Gaalkacyo ayaa ...
(WARBIXIN+SAWIRO) Safarkii Madaxweyne Gaas deegaanadii uu soomarey iyo Imaanshaha Gaalkacyo.
November 11, 2016	Leave a comment 440 Views
(Gaalkacayo ):-Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo ayaa maanta 11 Nov, 2016 safar shaqo ugu anba baxay gobolka mudug iyadoo si diirran loogu soo dhoweeyey deegaanka cagaaran iyo magaalada Gaalkacayo ee xarunta Gobolkaasi. Madaxweynaha waxaa safarka ku wehelinayey masuuliyiin ka tirsan golayaasha Dawladda Puntland iyo masuuliyiin ka tirsan madaxtooyada Dawladda Puntland waxaana ...
Ergayga Qaramada midoobay Uqaabilsan Soomaaliya Keating oo Soogaaray Magaalada Boosaaso
November 7, 2016	Leave a comment 137 Views
(Boosaaso) Wafti uu hogaaminayo ergayga qaramada midoobay uqaabilsan soomaaliya michael keating ayaa ka soodagay garoonka caalamiga ah ee magaalada boosaaso. Sida ay Warar hoose Puntsom.com ay heshay ay sheegayaan in Keating uu la kulmi doono madaxweynaha dowlada puntland cabdiwali maxamed cali gaas oo ay arimo badan kawada hadli doonan sida Dagaalka gaalkacyo iyo arimaha doorasha soomaaliya. Wixii war ku soo ...
Warar ku saabsan Dagaalka ka socda Gaalkacyo
November 6, 2016	Leave a comment 93 Views
Gaalkacyo: Inta la xaqiijiyay 4 ruux ayaa geeriyootay halka 15 qof oo kale ay dhaawacmeen, kadib markii Dagaal culus uu saaka aroortii ka bilowday Galbeedka Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Dagaalak ayaa waxa uu dhexmaray maamulada Galmudug iyo puntland Dagaalka oo ahaa mid aad u xoogan ayaa waxaa la isku adeeg sanayay hubka noocyadiisa kala duwan, Qaar kamid ah Xaafadaha ...
Warbixin” Kobac dhanka Ganacsiga oo laga dareemayo xarunta Maamulka Hirshabeelle ee Magaalada Jowhar
November 3, 2016	Leave a comment 84 Views
JOWHAR: Magaalada Jowhar xarunta maamulka Hirshabeelle waxaa ka socda dhaq dhaqaaqyo siyaasadeed oo xooggan, iyadoo magaalada laga dareemayo is bedel aan horay loo arag. Musharaxiin xilal doon ah, siyaasiyiin iyo dad kale oo dano kale leh ayaa ku qul qulaya magaalada Jowhar, waxaana muuqaalka magaalada noqday mid ka duwan sidii looga bartay, waxaana dadka ay dib u soo xusuusisay xilligii ...
Maxay ciidamda Ethiopia uga baxeen degano ka tirsan Soomaaliya???
November 2, 2016	Leave a comment 93 Views
Ciidamo Ethopia-yaan ah oo aan ka tirsaneen howlgalka AMISOM ayaa maalmihii ugu dambeyay ka baxay degaano iyo dagmooyin ka tirsan gobolada Hiraan, Bakool, Galgaduud, kuwaas oo in mudo ah gacanta ku hayay deganadaas, iyadoo qaar kamid ah deganada ay baneyeen ciidamadaas ay la waregeen ciidamo ka tirsan Alshabaab. Siyaasiyiin falanqeeya arimaha siyaasada somaliya ayaa shegay in larumaysan yahay in sadax ...
(WARBIXIN+SAWIRO)Madaxweyne Kuxigeenka Puntland oo ka qaybgalay kulan looga Hadlayey Maalgashiga Soomaaliya oo ay qayb galeen Qaar kamid ah Masuulin Maamul Goboleedyada Dalka.
November 1, 2016	Leave a comment 63 Views
(Garoowe):-Madaxweyne ku xigeenka Dawladda Puntland ahna kusimaha Madaxweynaha Eng. Cabdixakiim Xaaji Cabdulaahi Cumar Camey ayaa maanta 01 November 2016 Garoowe ka ga qayb galay kulan uu soo qaban qaabiyey Bangiga Adduunka (World Bank), islamarkaana ay ka soo qayb galeen qaar kamida maamul goboleedyada Dalka, Guddoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliya iyo saraakiil ka socdey bangiga adduunka. Kulanka ayaa sidoo kale waxaa dhanka ...
Al-Shabaab” Waxaa isa soo dhiibay Oday dhaqameed caan ah
Xarardheer: Kooxda Al Shabaab ayaa ku soo bandhigtay Magaalada Xarardheer ee Gobolka Mudug Oday dhaqameed caan ah oo isku soo dhiibay. Nabadoonka oo lagu Magacaabo Maxamuud Cali Baarre ayaa sheegay in uu ka yimid Magaalada Cadaado ee Gobolka Galgaduud ee uu ka arrimiyo maamulka Galmudug. Waxa uu tilmaamay in deegaanada dowladda Federaalka Soomaaliya iyo maamul Goboleedyada ka jiraan oo uu ...
Raysal -wasaaraha Ciraaq ”Labo Mid ayaa Ubanaan daacish ”.
November 1, 2016	Leave a comment 67 Views
Hillary Clinton” Wax qalad ah Maanan sameyn
November 1, 2016	Leave a comment 55 Views
Hillary Clinton Waxay sheegeysaa inay ku kalsoon tahay in baaritaanka FBI-da ee email-lada cusub ee la soo bandhigay aysan sababi karin in lagu helo kiis ayada ka dhan ah. Musharraxa madaxweyne ee xisbiga Dimuquraadiga, waxay taageera yaasheeda u sheegtay in baarayaashu ay gaari doonaan gebogebo la mid ah baaritaankii bishii July oo ahaa in la ogaaday inaysan wax qalad sameyn. ...
DHAGEYSO: Xeer Ilaaliyaha Qaranka oo ka hadlay Dhalinyarada ku xiran caalamka
November 1, 2016	Leave a comment 50 Views
MUQDISHO: Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka Dowladda federaalka Soomaaliya Dr. Axmed Cali Daahir, ayaa sheegay in dhalinyarada soomaaliyeed ee ku xiran Caalamka ay haysato dhibaatooyin badan. Dr. Axmed Cali Daahir Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu tiriyay wadamada ay ku xiran yihiin dhalinyarada soomaaliyeed, waxa uuna sheegay in dhalinyarada lagu haysto inay ahaayeen ...
Xoghayihii Guud Ururka Iskaashiga Islaamka oo iscasilay
November 1, 2016	Leave a comment 58 Views
Xoghayihii Guud Ururka Iskaashiga Islaamka Iyad Abadi ayaa iska casilay xilka kadib markii sida la sheegay ay la soo gudboonaatay arrimo caafimaadkiisa la xiriira. Iyad Abadi oo 70 jir ah ayaa xilka Xoghayenimada Ururka Iskaashiga Islaamka qabtay Sanadkii 2012 kii, waxaana la sheegay in isaga iyo Madaxweynaha Masar Abdul Fataah Siisii ay xagga siyaasadda isaga soo horjeedeen kadib markii Xoghyaha ...
DHAGEYSO: Jubbaland”Maqaabili karno Qaxooti kale oo Dheeraad ah”
November 1, 2016	Leave a comment 62 Views
KISMAAYO: Maxamed Warsame Darwiish Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Maamulka Jubbaland ayaa tilmaamay in nolol xumo ay heysato dadka qaxootiga ah ee ka imaanaya Dalka Kenya. Waxa uu sheegay in aysan qaabili Karin qaxooti kale oo ka yimaada Dalka Kenya, isla markaana weli ay maareen la’yihiin dadka hada ku sugan deegaanada Jubbaland. Maamulka Jubbaland waxa uu joojiyay inuu soo dhaweeyo qaxootiga ...
DHAGEYSO: Ciidanka Itoobiya oo sheegay inaysan ka bixi doonin Degmada Xudur
November 1, 2016	Leave a comment 53 Views
Xudur: Taliyaha qeebta 3-aad ee ciidanka itoobiya ee kusugan magaalada xudur ee Gobolka bakool Kolnel Asarta ayaa waxa uu sheegay in ciidanka itoobiya Aysan kabixi doonin magaalada xudur waxa uuna tilmaamay in shabaab ay Go”doomiyeen dhammaan wadooyinka soogala degmada xudur ee Gobolka Bakool . Taliyaha waxa uu sidoo kale sheegay in kooxda shabaab ay xoojiyeen weerarada ay ku soo qaadaan ...
Guddiga Doorashooyinka Dadban” Waxaan walaac ka Muujinaynaa Faraglin Lagu Hayo Odayaasha 135-ta
November 1, 2016	Leave a comment 61 Views
MUQDISHO: Guddiga Federaalka Hirgelinta Doorashooyinka Dadban (GFHDD) oo gudanaya waajibka loo igmaday ee kormeerka hannaanka doorashooyinka iyo xaqiijinta in doorashooyinka si isku mid ah uga dhacdo dalka, wuxuu safarro xaqiiqa raadin iyo qiimeyn ah ku tagay deegaan doorashooyinka Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, iyada oo si la mid ah deg deg loo soo kormeeri doono deegaan doorashooyinka dhimman. Safarradaan ayaa ujeedadoodu ...